झलनाथ खनाल एमसीसीको मतदानमा सहभागी नहुने, अरु क-कसले गरे बहिष्कार ? — Sanchar Kendra
झलनाथ खनाल एमसीसीको मतदानमा सहभागी नहुने, अरु क-कसले गरे बहिष्कार ?
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसी परियोजना संसद्‍बाट स्वीकृतका लागि मतदान नगर्ने भएका छन् । आज बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा आफ्नो भनाई राखेर संसद् भवनबाट बाहिरिएका उनले उनले यथास्थितिमा एमसीसी परियोजना पास गर्न नहुने बताए ।
२०५४ सालमा भएको महाकाली सन्धि गर्ने क्षणलाई स्मरण गर्दै उनले त्यो बेला सो सन्धिले मुलुकको कायापलट हुने व्याख्या भएको बताउँदै अहिले एमसीसीको सन्दर्भमा भएको ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि त्यस्तै भएको बताए । उनले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौतामाथि मतदान नगर्ने बताएर संसद् भवनबाट बाहिरिएका थिए ।
उक्त मतदानमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका दुई सांसदले भाग नलिने भएका छन्। सांसदहरू गिरिराजमणि पोखरेल र अन्जना विशंखेले मतदान भाग नलिने स्रोतले जानकारी दियो। उनीहरूले यसबारे पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई जानकारी दिइसकेका छन्।
माओवादी केन्द्रको आजै बसेको संसदीय दलको बैठकले एमसिसी व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीले निर्णय गरे पनि एमसिसीको छलफलमा सहभागी माओवादी सांसदहरूले एमसिसी सम्झौताको विरोध गरेका छन्।
एमसिसी पारित गर्न दलहरूले ११ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको मस्यौदा तयार पारेका छन्। उक्त मस्यौदाका प्रतिलिपी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई वितरणसमेत गरिएको छ। नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषामा लेखिएको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसिसी अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको रणनीति नभएको, यो सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि नरहेको लगायत बुँदाहरू समेटिएका छन्।